ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ဖလှယ်ရေး ကောင်စီ (The International Friendship Exchange Council- FEC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Norio Yamaguchi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Post date: 03/22/2013 - 13:58
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ဖလှယ်ရေးကောင်စီ (The International Friendship Exchange Council-FEC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr. Norio Yamaguchi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ အား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၊ သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသို့ တွဲဖက်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး H.E. Mr. pascal CANFIN ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းသည် ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသို့ တွဲဖက်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီး H.E. Mr. pascal CANFIN ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၊ သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း Ruby Hall နှင့် Jade Villa အဆောက်အဦများ အချိန်မီ ပြီးစီးရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားပြီး Ruby Hall နှင့် Jade Villa များ တည်ဆောက်နေမှုအား လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
Post date: 03/19/2013 - 13:23
နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာဖြစ်သည့် Ruby Hall နှင့် Jade Villa အဆောက်အဦများ အချိန်မီ ပြီးစီးရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ Ruby Hall တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ရှင်းလင်းဆောင်၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။